जानिराख्नुहोस् अनुहारमा भएको अनावश्यक रौँ हटाउने यी ५ तरिका
एजेन्सी । कतिपय मानिसहरु आफ्नो हात, खुट्टा तथा शरीरका विभिन्न अंगहरुमा आएका अनावश्यक रौँ कारण एकदमै चिन्तित देखिन्छन् । जसकारण शारीरिक कुरुपताका साथै असहजता पैदा गर्ने गरेको पाइन्छ ।
वैज्ञानिक पद्धतीबाट उपचार गर्न पनि खर्चिलो नै छ, त्यसैले जो कोहीले वैज्ञानिक पद्धतीमार्फत उपचार गर्न सक्दैनन् । त्यसैले घरेलु उपचार-पद्धती अपनाउँदा नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
यी पाँच घरेलु उपचार अपनाउँदा तपाईले शरीरकाे अनावश्यक रौँहरुबाट छुटकारा पाउन सक्नहुन्छ ।
१.चिनी र कागतीको रस
दुई चम्चा चिनी र दुई चम्चा चम्चा कागतीको रस लिनुहोस् । यी दुईलाई आपसमा राम्रोसँग मिसाउनुहोस् र पेस्ट बनाउनुहोस् । चिनीको कणले निष्क्रिय छालालाई सफा बनाउने काम गर्छ । तयार पेस्टलाई हल्का तातो बनाउनुुहोस् । केहीसमय कुर्नुहोस्, किनकी पेस्ट ठन्डा हुनुपर्छ । नत्र चिनीको कण राम्रोसँग घुल्न नपाए यसमा पानीको मात्रा मिल्न सक्छ । जब पेस्ट सामान्य अवस्थामा आउँछ, त्यसपछि यसलाई अनावश्यक रौँ भएको ठाँउमा लगाउनुहोस् । यसलाई सुक्न दिनुहोस् र करीब २० मिनेटपछि पखाल्नुहोस् ।
२. कागती र मह
दुई चम्चा चिनी, दुई चम्चा चम्चा कागतीको रस र एक चम्चा मह लिनुहोस् । यसलाई पनि मिसाउनुहोस् अथवा घोल्नुहोस् । यो मिश्रणलाई तीन मिनेटसम्म तताउनुहोस् । यसलाई पनि ठन्डा बनाउनुहोस् । र तयार भएको मिश्रणलाई जुन ठाँउमा अनावश्यक रौँ छ, त्यहाँ लगाउनुहोस् । यो पद्धतीलाई तपाईले हप्तामा दुई-तीन पटक प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ ।
३.जौ र केराको प्रयोग
दुई चम्चा जौ र एउटा पाकेको केरा लिनुहोस् । जौ र केरालाई राम्रोसँग पिस्नुहोस् । यसलाई अनुहारमा भएका अनावश्यक रौँ भएको ठाँउमा केहीबेर दल्नुहोस् । यो उपाय हप्तामा एक पटक गर्नु नै लाभदायक हुन्छ ।
४. तुलसीको पात र प्याजको प्रयोग
एक मुठ्ठी तुलसी र दुई वटा प्याज लिनुहोस् । प्याजको बाहिरी पत्र निकालेपछि भित्रपट्टि रहेको झिल्ली (मेंबरेन)लाई निकाल्नुहोस् । यो मिश्रणलाई राम्रोसँग पिस्नुहोस् । यसलाई पनि अनुहार तथा शरीरको कुन भागको अनावश्यक रौँ हटाउने हो, त्यही ठाँउमा लगाउनुहोस् । लगाएर २० मिनेटजति छोड्दिनुहोस् । यसपछि सामान्य पानीले धुनुहोस् । यस पद्धतीलाई हप्तामा तीन–चारपटक गर्नु राम्रो हुन्छ ।
५.बेसार र दुधको प्रयोग
एक चम्चा बेसार र थोरै दुधलाई घोलेर केही बेरसम्म राख्नुहोस् । तयारी घुलित मिश्रणलाई प्र्रभावित ठाँउमा लगाउनुहोस् । १५ देखि २० मिनेटसम्म लगाउनुहोस् । केहीबेरमा सुकेपछि सफा पानीले धुनुहोस् । जसले तपाईको अनुहारमा तथा अन्य ठाँउमा रहेका अनावश्यक रौँहरुबाट केही हदसम्म राहत दिनेछ ।
एजेन्सी, २० जेठ । लकडाउनको समयमा दीपिका पादुकोण र श्रीमान् रणवीर सिंह सामाजिक सञ्जालमा खूब सक्रिय देखिएका छन् । दुबैले तस्विरहरु...